ထိပ်တန်း Spamming ISP ၁၀ ခုသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည် Martech Zone
မှ စပိန်။ ဒါကလုံးဝရယ်စရာမကောင်းဘူးလား။ Verizon နှင့် ATT (Yahoo! တို့ပါ ၀ င်သော) နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ Spam-blocking စွမ်းရည်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် ISP မ်ားအများဆုံး spam များဖြစ်သည်! Spamhaus သည်ဤပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်ပြီးပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ပါက Verizon နှင့် ATT (နှင့်အခြားသူများ) သည်ဤအသုံးပြုသူများကိုမည်သို့စေ့စေ့လေ့လာနိုင်၊ ပိတ်ပစ်နိုင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကောင်းဘီလ်မှာဤကဲ့သို့သောအခြေအနေများအတွက်အကောင်းဆုံးဥပစာစကားရှိသည်။ ဒါဟာ roaches ကိုဖြန့်ချိဖျက်ဆီးစက်နှင့်တူ!
အဆိုးဆုံး Spam Service ISP ၁၀ ခု
ဇွန်လ 02 ရက် 2007 မှာ
လူသိများသော Spam ပြuesနာများ
ဇွန် 2, 2007 မှာ 5: 01 pm တွင်
သင်အမှန်တကယ်၎င်းကို Machiavellian ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုလိုပါက ISP တစ်ခု၏အနေအထားတွင်ရှိနေခြင်းထက် spam များကိုပိုကောင်းသောနည်းလမ်းကဘာလဲ။ မင်းက e-mailbox ရှိရင်မင်းကိုဘာကတားဆီးမလဲ။ = (တစ်ခုလုံးဖောက်သည်အရှုံးအရာအပြင်။
အနည်းဆုံး Yahoo, Google နှင့် MSN တို့သည်ဤစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
ဇွန် 4, 2007 မှာ 10: 31 pm တွင်
သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည်မှာ၎င်းသည် TOP10 ISP ဖြစ်လိမ့်မည် - Pun မရည်ရွယ်ပါ။ VSNL သည်အိန္ဒိယ၏နံပါတ် ၁ ISP ဖြစ်သည်